Proclaiming the Word - Ny Tompo Jesosy. Iza moa Izy ary inona no ataony? | Outlines of Messages
Ny Tompo Jesosy. Iza moa Izy ary inona no ataony?
(Araka ny Apokalypsy 3, 7-9)
Ny Tanànan’I Filadelfia.
Ny fiangonan’I Filadelfia no nanao mihoatra ho an’ny Tompo noho ireo fiangonana fito ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy. Tena nahatoky tamin’ny iraka nampanaovina azy izy. Niaina akaikin’ny Tompo izy ary tsy nanameloka azy Izy, na dia niteny ny fahotany aza. Ny fanambiny dia nitodika tamin’ny ho avy. Nefa hiditra amin’ny varavarana izay notazonin’ny Tompo nivoha ho azy va izy?
Ny Tompo Jesosy – Izy no Mpanoratra.
Ao amin’ny Apok 3, 7-13 ny Tompo Jesosy dia nanolotra ny tenany tamin’ny fiteny mifanaraka tsara amin’ny zava-misy ho an’izay hamaky ny taratasy.
1. He is holy (Apok. 3, 7).
Ny Tompo Jesosy dia tanteraka tsy misy diso sy tsy misy tsiny. Ny toetrany dia tanteraka. Ny fahamasinana dia toetra ambony indrindra amin’Andriamanitra.. “Ilay Masina” no anarana hahafantaran’ny jiosy an’Andriamanitra. Ao amin’I Isaia 43, 15 no manambara Andriamanitra hoe: “Izaho no Jehovah, Iray Masinareo, Mpamorona ny Israely, sady Mpanjakanareo.” Tsy maintsy mahita ny fahamasinan’I Jesosy Kristy amin’ny maha Andriamanitra Azy isika. MASINA IZY noho izany dia mankahala ota Izy. Ny tsy mpino dia tokony hamela Azy hamaha ny olany mikasika ny ota. MASINA IZY noho izany ny mpino dia tokony ho masina koa.
2. Marina Izy (Apok 3, 7).
Ny Tompo Jesosy no Ilay ao ambadiky ny zavatra rehetra, Ilay tena mahatoky sy azo antoka.
Milaza Izy fa “Ilay Marina”: amin’ny teny fototra (anathenos), ny dikany dia hoe: zavatra marina, tena izy, tsy sandoka. Ao amin’ny Tompo Jesosy isika dia mahita ny zava-misy marina. Rehefa mieritreritra sy misaina Azy isika dia manatrika ny tena fahamarinana: Jesosy dia tena Izy. Ny hoe tena izy dia ny teny rehetra izay teneniny dia Tenin’Andriamanitra marina ary ny fampanantenany dia tanterahany avokoa. Noho izany, afaka mahatoky Azy isika amin’ny famonjena raha ohatra ka mahatoky Azy isika. Amin’,ny maha mpino antsika , dia mila mahatakatra fa izay ambaran’I Jesosy Kristy dia fahamarinana. Raha manome fanamby antsika amin’ny zavatra iray Izy dia mandehana ary ataovy izay asainy atao fa ho tanteraka izany.
3. Mitana ny lakilen’I Davida Izy. (Apok 3, 7 )
Ny lakile dia milaza fahefana. Ny Tompo Jesosy dia mitana ny lakilen’iDavida. Ny boky hafa izay manambara ny lakilen’i Daivda diaao amin’ny bokin’I Isaia ( Isaia 22, 20-23). Eliakima ny nomena ny lakilen’ny tranon’I Davida tamin’ny fanjakan’I Hezekia. Io lakile io no mamoha ny tranon’i Davida, izay mitahiry ireo rakitra sy harena rehetran’ny mpanjakan’I Joda. I Eliakima no nanara-maso ny fidirana sy izay rehetra afaka miditra ao sy izay afaka mivoaka: izay afaka miditra ao amin’ny mpanjaka Davida. Izy no mpanampy ny mpanjaka Davida. Izy no mamoha sy manidy ny varavarana.
4. Tia azy Izy (Apok. 3, 9)
Nahazo tsara ny toerana sarotra natrehan’ny rahalahy tao Filadelfia Izy. Nikatsaka izay tena soa ho an’izy ireo ny Tompo Jesosy ( Jaona 16, 27). Ireo izay niaina tany Filadelfia (Fitiavan-drahalahy) dia niaina ny fitiavan’Andriamanitra. Ny tena fitiavan-drahalahy dia tena tsy hisy mihitsy raha tsy mandray ny fitiavan’Andriamanitra aloha. Ny tsy mpino dia mila mahalala fa Jesosy Tompo dia maty noho ny fitiavana. Nanana ny faniriana ny hamonjy ny olona tamin’ny alalan’ny fitiavana Izy. (Jaona 3, 16; Rom 5, 8).